Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Furlough-ka COVID-19 wuxuu ku dhammaanayaa waqtiga ugu xun dalxiiska UK
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Dhammaadka furlough-ka COVID-19 wuxuu ku soo beegmayaa waqtiga ugu xun dalxiiska UK
Falanqeeyayaasha warshadaha ayaa saadaalinaya safarka gudaha ee UK inuu dib ugu soo laabto heerarka 2019 inta lagu jiro 2022, markaas oo uu gaari doono 123.9 milyan oo safar. Si kastaba ha noqotee, safarada dibedda ee dibedda ayaa qaadan doona waqti dheer mana ku laaban doonaan heerarkii COVID kahor 2024, markaasoo ay garaaci doonaan 84.7 milyan oo safar.
Dhamaadka furlough dhab ahaantii ma aysan imaan karin xilli ka xun sanadka warshadaha safarka UK.
In kasta oo soo kabashada gudaha UK ay ku socoto wadadii dib u soo noqoshada 2022, warshaduhu waa inay marka hore maraan xilliga jiilaalka ee adag sida caadiga ah.
Ku -dheellitirka dheelitirka wuxuu u horseedi doonaa madax -dhaqameed shirkado badan oo socdaal ah - gaar ahaan kuwa sida weyn ugu tiirsan safarka caalamiga ah.
Iyada oo qorshihii furitaanka ee Boqortooyada Midowday uu dhammaanayo bishaan, shirkadaha safarka ayaa lagu qasbi doonaa inay yareeyaan kharashaadka si ay uga badbaadaan jiilaalka. Khubarada warshadaha safarka iyo dalxiiska ayaa ka digaya in tillaabooyinka noocaas ah ay sidoo kale ku jiri karaan shaqo -dhimis.
Dhamaadka furlough runtii ma imaan karin a waqtiga ugu xun sanadka warshadaha safarka UK. Xilligii jiilaalka ee adkaa ayaa inagu soo fool leh, tallaabooyinka dhimista kharashkuna waxay lama huraan u noqon doonaan badbaadada. Nasiib darro, tan micnaheedu waa shaqo -ka -baxis ayaa dhici karta, maaddaama tani ay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lacag loo keydiyo.
Falanqeeyayaasha warshadaha ayaa saadaalinaya Socdaalka gudaha UK si loogu laabto heerarka 2019 inta lagu jiro 2022, marka ay gaari doonto 123.9 milyan oo safar. Si kastaba ha ahaatee, caalami ah Safarada dibadda waxay qaadan doonaan waqti dheer mana ku soo laaban doonaan heerarkii ka horeeyey COVID illaa 2024, markaas oo ay garaaci doonaan 84.7 milyan oo safar.
In kasta oo soo kabashada gudaha ay ku socoto wadadii dib u soo noqoshada 2022, warshaduhu waa inay marka hore maraan xilliga jiilaalka ee adag sida caadiga ah. Haddii aan la helin dalab ku filan, dakhligu wuu sii socon doonaa in la caburiyo oo shirkaduhu way dhibtoon doonaan. Isku dheelitirnaan wanaagsan waa in la helaa inta u dhexeysa shaqo -ka -dhimista iyo deg -degga mustaqbalka.
Khubarada warshadaha ayaa sidoo kale tilmaamaya halista ah in tirooyinka shaqaalaha loo rido shirkadaha socdaalka ee UK, Haddii shirkaduhu bilaabaan inay shaqaalaha ka dhigaan kuwo aan la soo koobi karin, waxay awoodi doonaan inay ka jawaabaan kororka degdegga ah ee dalabka. Ku -dheellitirka dheelitirka wuxuu u horseedi doonaa madax -dhaqameed shirkado badan oo socdaal ah - gaar ahaan kuwa sida weyn ugu tiirsan safarka caalamiga ah. Dabeecadda deg -degga ah ee xannibaadaha socdaalka ayaa laga yaabaa inay si lama filaan ah u aragto dalabka meelaha qaarkood waqti gaaban. Haddii shirkaddu ay yar tahay shaqaalaha, waxay seegi kartaa dakhli aad loogu baahan yahay. Taa bedelkeeda, sii haysashada shaqaale aad u tiro badan waxay ku dambayn kartaa kharashaadka faraha ka sii baxaya.
Kordhinta qorshaha furlough ee warshadaha socdaalka waxay waqti u iibsan kartaa waaxda ilaa dalabku bilaabo inuu xoojiyo. Si kastaba ha ahaatee, rajada ayaa aad u yar.